Wednesday 11th January 2017 15:48:30 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Sare
Sida aan taariikhda in badan ka akhriyey siyaasiga dhabta ahi ma aha mid ka kiciya dadkiisa,ee waa ka marka ay dadkiisu kacaan toosiya kuna haga jidka horumarka, tilmaama,la taliya,ee mideeya una horseeda meesha ay ku gaadhaaan jidka horumarka, walaalnimada, wadajirka. Siyaasiga dhabta ahi waa nafii hore dantiisa gaarka ah ka hormariya tan caamka ah ee bulshadiisa,waa mid ka danqada dhibta iyo hagardaamooyinka siyaasiga xumi ku hayo mujtamiciisa.hadaba waxaan maanta soo bandhigaya siyaasiga labaad ee silsiladaydan ku salaysan waddani wuxuu noqon doona xoghaya guud ee waddanimaxamed cabdilaahiuurcade.
Reer hargeysaway garanayaan si fiican magaca uurcade!! bal dib u noqda waa Maayor Ku xigeenkii hore ee caasimadda 2002-2012, waa nin ku sofoobay into xilkaas hayay Musuqa iyo maamul xumada uu u gestay Caasimada, isago oo dhulkii danta guud ee Caasimada siiba dhulkii ay caasimadu ku balaadhatay ama ku fiday beerihii ku yaalay wixii dan guud ahaan jiray oo madax ka aha boobkooda isaga iyo Joomitiro ay ku shuraako ahaayeen waagaas!! maantana wuxu aflagaadinaya xukuumadd joojisay boobka umadda iyo wax la dhaho dan guud oo ay ka qaaday dawladda hoose ee hargeysaa !!. waxana la yaabanahay xisbiga waddani oo noocaas ka dhigtay xoghaye guud intii u dhisanaa !! waddaniyow miyaad u soo diyar garawday in hantida umadda u soo shaqo tag tid ?!! shacabku kaa diid ariintaas gurigaagana nadiifi bal horta waddaniyow inta aad cod raadinaysaan oo aad ku waalatayn heesta wadaniga dhabta allow dhawr !!!, waxaan udhanayauurcadexukuumadda aad ka hadlayso mar wealba waa tii ka nadiifisay hargeysaa , ka xishoo taariikhdaada madow .